गर्धन दुख्यो ? यसरी गर्नुस् घरेलु उपचार – Nepal Press
गर्धन दुख्यो ? यसरी गर्नुस् घरेलु उपचार
२०७७ माघ १६ गते ९:१०
गर्धन दुखाइ तपाईंले आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्नुभएका स-साना गल्तीका कारण हुन सक्छन । आउनुस् हामी यस कष्टको कारण र व्याख्याबारे छलफल गरौं ।
डाक्टर भन्छन् कि एक व्यक्तिले दिनमा लगभग ६ देखि १० घण्टा सुत्नु पर्छ। त्यसो गर्दा हामी अर्को दिन काम सजिलोसँग गर्न सक्दछौं । उचित निद्राको साथ, मुटु, मस्तिष्क, र पाचन पथसहित सजिलै स्वस्थ कार्य गर्न सकिन्छ ।
यस पीडाको सबैभन्दा सामान्य कारण जब तपाईं सुत्नुहुन्छ तपाइको गर्धनको पोस्चर कस्तो छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । सुत्दा तपाईंले कडा वा नरम सिरानी के प्रयोग गर्नुहुन्छ एकदमै ख्याल राख्नुपर्दछ । साथै, यो निश्चित गर्नु जरूरी छ कि टाउको र तपाईंको शरीरको लाइन सिरानीमा मिल्दो छ/छैन । यसले घाँटी वरपरको मांसपेशीको तनाव सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ।
म निद्रा र आसनको महत्त्वमा जोड दिन चाहन्छु, किनकि धेरै जसो कडा सिरानी प्रयोग गर्नेहरूले घाँटीभित्र र वरिपरि कठिनाइ र दुखाइ सामना गर्छन् ।
तपाईंको प्रश्न हुन सक्छ – गर्धन दुखाइ र सिरानीको सम्बन्ध के छ ? र, समस्या कहाँ छ ?
हामीले प्रयोग गर्ने सिरानी र गर्धन दुखाइको सम्बन्ध शतप्रतिशत छ । जब मानिसले गर्धन दुखाइको समस्याबारे डाक्टरलाई भन्छन, उनीहरूलाई पहिले सिरानी प्रयोगमा रोक लगाइन्छ । यद्यपि, कसैले पनि त्यसो गर्नुको कारण सोध्दैनन्।
तपाईं यदि गलत सिरानीको प्रयोग गरेर सुतिरख्नु भएको छ भने बिहानै ओछ्यानबाट उठ्दा घाँटीमा रहेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मांसपेशी ‘ट्रापेजियस’ दुखेको महसुस गर्नुहुन्छ ।
यसको कारण इनन पंच सामान्य अवस्थाबाट कडा हुनु हो जसले सिरानीमा पर्ने गर्धनको वरपर चिल्लो मांसपेसीहरूमा परिवर्तन हुन्छ। जब हामी टाउको एक छेउमा फर्काउँछौ यी मांसापेसीमा तनाव बढ्छ, त्यसको नतिजा टाउको दुख्ने र पीडा हुने गर्दछ. यसलाई सर्विको जेनिक हेडेक भनिन्छ, जहाँ सर्विको को अर्थ गर्धन उठेको हो।
केही व्यक्ति फिजियोथेरापीमा आउँदा चिकित्सा सहायता र उपचार खोज्नुहुन्छ तर टाउको दुखाइको पछिल्लो मुख्य कारण घाँटीका मांसपेसेहरू जकडिनु नै हो।
यदि तपाईं गर्धन दुखाइ अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबैभन्दा पहिला सिरानी बदल्नुहोस् । तपाईं त्यस्तो सिरानी किन्नुहोस जुन तपाईंको टाउकोको स्थिति सीधा राख्न र शरीर लाइनमा राख्न मद्दत गरोस् । यस्ता सिरानीहरू पसलहरूमा मज्जाले उपलब्ध हुन्छन्।
यद्यपि घाँटी दुखाइ भएका व्यक्तिहरू आफ्नै लागि विशेष आकारको सिरानी लिन सक्छन् त्यस्ता सिरानी प्रयोग गर्दा यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि गर्धन र थोरसिक हड्डीहरू एक सीधा लाइनमा स्थित हुन् ।
प्रकाशित: २०७७ माघ १६ गते ९:१०
हैजाबारे सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग खाणले गरे छलफल
भारतमा एकैदिन १२ हजार बढीमा कोभिड संक्रमण
बालबालिकालाई आजदेखि कोभिडविरुद्धको फाइजर खोप दिइँदै
सन् २०५० सम्म विश्वका २५० करोड मानिसमा सुस्त श्रवण देखिने अनुमान, यस्तो छ कारण
सरकारले पैसा नदिएपछि बीएण्डसी र नोबेल मेडिकल कलेजद्वारा बीमा कार्यक्रम रोक्ने घोषणा (भिडिओ)